Ejipta: Mandria Am-piadanana Papa Shenouda III · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2012 3:19 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, Português, বাংলা, English
Matroka tanteraka ny filentehan'ny masoandro tao Ejipta omaly [asabotsy] – Nodimandry tamin'ny faha-89 taonany rehefa niady mafy tamin'ny aretina nandritra ny fotoana maharitra Pope Shenouda III.
Taorian'ny fanambarana ny fahafatesany dia niely tato amin'ny aterineto ny hafatra matsatso momba ny safidy politikan'ny Papa, mpanohana ny fitondrana sy ny miaramila. Maro no miresaka manokana ny heviny nandritra ny Fandripahana tao Maspero [mg]. Misy ary ny hevitra sy tsikera melohin'ny mpiserasera izay nilaza fa raha tsy jerena ny safidy politikany dia mpitarika ara-panahy nanana fandresen-dahatra manokana tamin'ny Kôpta Ejipsiana ny Papa.
Wael Eskander nanoratra tao amin'ny bilaogy fa ho valin'ny fanaratsiana atao amin'ny Papa farany:
Ao anatin'izany zotra izany ihany, Gamal Asaad (@Gamal_As3d) no manoratra ao amin'ny Twitter :
@Gamal_As3dمهما إختلفنا مع البابا سياسيا سيظل هو أبونا الروحى ومعلمنا العظيم الذى تعلمنا منه المسيحية
Ny fanirian'ny Papa Shenouda dia ny handevenana azy any amon'ny monasiteran'i Wadi El Natrun, iray amin'ny monasitera nanaovana sesintany azy nandritra ny fitondran'ny filoha Anwar Al Sadat noho ny nanamelohany ny Fifanarahan'ny Camp David sy ny fandavany ny hitsidika an'i Jerosalema tambany fanapahan'i Isiraely. Adam Makary (@adamakary) mahita izany ho misy esoeso:
@adamakary: Mahaliana fa nisafidy ny ho alevina any amin'ny toerana tsy nahafahany mivoaka nandritra ny fitondran'i Sadat naharitra 4 taona ny #PopeShenouda, monasitera Pishoi
Amin'ny Talata no halevina ny Papa Shenouda III. Mandritra izany fotoana izany dia ny Metropolitana Bakhomious no hanmpo vonjimaika mandra-pahatongan'ny fifidianana. Mandio i Bassem Sabry (@Bassem_Sabry) :
@Bassem_Sabry: Roa volana no hanompoan'ny Metropolitana Bakhomious eo amin'ny toeran'ny Papa farany #Shenouda, ary amin'ny faran'izany no efa voafidy ny Papa #Coptic vaovao.